Waze horeyba wuxuu ula midoobay Apple CarPlay muuqaal la'aan | Waxaan ka socdaa mac
Dhowr toddobaad ka hor waxaan ka hadlay on Waxaan ahay ee Mac ku saabsan imaatinka of interface cusub 'Waze' si uu ula qabsado CarPlay. Tani waxay ku jirtay marxalad beta ah taas oo dadka isticmaala qaarkood ay ku arki karaan nidaamka widget-ka cusub shaashadda guriga iyo marinka oo sidoo kale la arki karo.
Dareenkan, adeegga Waze ee Google wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee hirgeliya ikhtiyaarkan kuwa adeegsada barowsarkan gaariga. Hadda waxaan ku dhex mari karnaa Waze sida aan ku sameyno Khariidadaha Apple ama Google Maps, adigoon u baahnayn inaad qabsato shaashadda gaariga oo dhan.
Dhowr isticmaale ayaa bilaabaya inay ikhtiyaarkan la heli karo iyo waxay ku muujinayaan baraha bulshada:
@ 9to5mac @MacRumors @waze Dashboard waze waa kan !!!!! pic.twitter.com/gvuaaTSJRG
Markii hore ikhtiyaarkan lama heli karin oo aad ka tagto hal barnaamij oo loo maro mid kale waa inaad ka baxdo biraawsarka, markaa fikrad fiican ma ahayn. Si kastaba xaalku ha ahaadee, dhinacyadan CarPlay ayaa si tartiib tartiib ah loo hagaajiyay iyada oo ay ugu wacan tahay hagaajinta macruufka iyo aad baa loo qiimeeyaa markaan gadaal ka marno giraangirta gaariga maadaama ay na siineyso macluumaad dheeri ah si fudud oo fudud. Shaki la'aan, inaad kuhesho taageerada Waze waxay ahayd waxa appku ka maqnaa waxayna umuuqataa inay durba gaadhayso isticmaaleyaasheeda.
Su’aashu waa haa Miyaad ka mid tahay kuwa adeegsada Khariidadaha Apple, Google Maps ama Waze si ay u maraan? Noqo sida ay hadda tahay dhammaantood waxay si habsami leh ugu dhexgalaan interface-ka cusub ee CarPlay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Waze hadda waxay la midoobeysaa Apple CarPlay muuqaal la'aan
Ma iibsatay mise waxaad qorsheyneysaa inaad iibsato Mac leh processor-ka M1?